Clenbuterol (CLEN) HCL အမှုန့် (21898-19-1) hplc≥98% | AASraw
Clenbuterol Hydrochloride အမှုန့်
/ ထုတ်ကုန်များ / အဆီဆုံးရှုံးမှုအမှုန့် / Clenbuterol (CLEN) HCL အမှုန့်
4.00 ထဲက5အခြေခံ 8 ဖောက်သည် ratings
SKU: 21898-19-1. အမျိုးအစား: အဆီဆုံးရှုံးမှုအမှုန့်
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Clenbuterol ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့် (clen) HCL အမှုန့် (21898-19-1) မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
Clenbuterol (CLEN) HCL အမှုန့်ကိုဗီဒီယို
| ။ကုန်ကြမ်း Clenbuterol (CLEN) HCL အမှုန့် အခြေခံဇာတ်ကောင်:
အမည်: Clenbuterol (CLEN) HCL အမှုန့်
စတီရွိုက်သံသရာအတွက် II.Raw Clenbuterol (CLEN) HCL အမှုန့်သုံးစွဲမှုကို
Clenbuterol Hydrochloride (CAS 21898-19-1) ပုံမှန်အားဖြင့်အဆိုပါကာယဗလသို့မဟုတ်အဆီဆုံးရှုံးမှုအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်, Clen, Clen HCL မှာအမည်ရှိဖြစ်ပါတယ်။
2 ။ Clenbuterol HCL အမှုန့်သုံးစွဲမှု:
Clenbuterol Hydrochloride အဆီလောင်ကျွမ်းမှုကိုအဘို့ခိုင်ခံ့ပါဝါရှိပါတယ်။ ဒါဟာအစအလွန်ကြီးစွာသော thermogenic အကျိုးသက်ရောက်မှု (ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်တိုးပွါးလာ) ရှိပါတယ်။ Clen သွေးပေါင်ချိန်တိုးပွါးနှင့်ခက်ခဲစိတျနှလုံးအလုပ်စေသည်။ ဤသည်ဆွခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်တိုးစေပါတယ်။ အချက်အလက်များအရ, ကလည်းခန္ဓာကိုယ်အဆီရှို့ကူညီပေးသည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သော, glycogenolysis (glycogen ၏ပျက်ပြား) ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
3 ။ Clenbuterol HCL အမှုန့်အပေါ်သတိပေး:
Clenbuterol HCL အမှုန့်ပေါ် 4.Further ညွှန်ကြားချက်:
စျေးကွက်များတွင်ပုံမှန်အားဖြင့် Salbutamol ဖြစ်သောအတု Clen, အများကြီးရှိပါတယ်။
သငျသညျ legit Clenbuterol ရှိပါကသင်သည်သင်၏အပူချိန်ယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သငျသညျ Clen ပေါ်မှာဆိုရင်နေချိန်မှာသင်ပြီးတော့တစ်ဦး Clen သံသရာစတင်ရန်နံနက်ယံ၌သင်တို့၏အပူချိန် ယူ. ခင်မှာပြန်ယူပါ။
ဒါဟာတကစာချုပ်ရဲ့ အကယ်. ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်အနည်းငယ်တိုးမြင်လိမ့်မည်။ သင်တို့သည်လည်းလက်လှုပ်ခြင်းနှင့်အလွန်အစာရှောင်ခြင်းနှလုံးခုန်တွေ့ကြုံခံစားသင့်ပါတယ်။ သင်တို့တွင်အချို့သောဒါဆေးထိုးတက်နိမ့်ဆေးများပေါ်ဤအကြောင်းသက်ရောက်မှုကိုခံစားရနှင့်ဖြစ်ပျက်မမြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဤအရာတို့ကိုအဘယ်သူအားမျှသငျသညျ 80-100mcg ၏ဆေးများပေါ်မှာဆိုရင်လျှင်ပင်ဖြစ်ပျက်လျှင်, သိသာသင်ရိုက်နှက်တယ်။
5 ။ ကုန်ကြမ်း Clenbuterol HCL အမှုန့် (CAS 21898-19-1):
အဆိုပါအသုံးအများဆုံးအတု "Clen" ကိုလည်း albutamol ဖြင့်သမုတ်သော Salbutamol သည်။ သူတို့သည်အအဓိကအားကွာခြားချက်သောက်သုံးသောဖြစ်ပါတယ်။ Clen 40mcg မှာဖြစ်ပါတယ် salbutamol 100mg မှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်ရုံကုန်ကြမ်းအမှုန့်အနံ့များနှင့်အမှန်တကယ်ဖြစ်သည့်တဦးတည်းထွက်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါသန့်ရှင်းစင်ကြယ်စမ်းသပ်ခြင်း, သင် HPLC စမ်းသပ်လုပ်ဖို့လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
6 ။ Clenbuterol HCL အမှုန့်ချက်ပြုတ်နည်း:
100mcg / ml မှာအရည် Clen HCL အမှုန့်အောင်
မှတ်ချက်: အကယ်. သင်သည်အမှန်တကယ်ဘာလုပ်နေသိဒါမှမဟုတ်သင်ဆိုးဆိုးရွားရွားတက်လေနိုင်မည်မဟုတ်လျှင်နှစ်ခုဒြပ်ပေါင်းများနှင့်အတူ Messing အလွန်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်, သူတို့နှင့်အတူ cuck ပါဘူး။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါးရှုပါ။
(droppers အပေါ်တိုင်းတာနှင့်အတူ) ပုလင်းနှင့် droppers
အကြီးစား 12 လီတာအရည်ကွန်တိန်နာ (သံပုံးလောက်ပါလိမ့်မယ်)
100mcg / ml Clenbuterol (ဤစာရွက်အဖြစ်ကောင်းစွာ T3 အတွက်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်) Making ။
အဆိုပါ BA, အမှုန့်ဖျက်သိမ်းရေးနှင့်မြုံအချောထုတ်ကုန်စောင့်ရှောက်ခြင်းအဘို့အတင်းကြပ်စွာဖြစ်ပါတယ်ငါ့ကိုပိုပြီးစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်အဘယ်အရာကိုမျှထို့နောက်သင့်နေ့စဉ်ထိုးယူမယ့်တချို့ဘက်တီးရီးယားသင့်ရဲ့ shit တစ်ကိုလိုနီထူထောင်ထားပါတယ် (ထိုပြုမိခဲ့) ထို။ ရှာဖွေတာရှိရဲ့ယုံကြည် ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကဒီစာရွက်ထဲမှာ 1% သုံးစွဲဖို့သွားနေကြပါတယ်။
ဒီစာရွက်အမှုန့်များ၏ 1 ဂရမ် (ငါ၏အသင်္ချာမှန်ကန်လျှင် 10,000 ဆေးများစေမည်) အဖြစ်ပြောင်းလဲရန်ဖြစ်သည်။
BA ဘွဲ့ = 100 mL
ရေ = 9.9 လီတာ (9,900 mL) Distiled ။ ဟုတ်ကဲ့ကြောင့်နောက်တဖန်ဤအမှုသည်ငါ့သင်္ချာမှန်ကန်ယူဆသည်တစ်ဦး misprint မဟုတ်ပါ, လီတာဖြစ်ပါတယ်။ )
1 အဆင့်။ Tyvek ဝတ်စုံအပေါ်ထားပါ။ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး Clenbuterol နှင့်အတူတစ်ဦးမဖြစ်မနေဖြစ်ပါတယ်။
2 အဆင့်။ ပန်းချီဆရာများအပေါ် mask ထားပါ။
3 အဆင့်။ လက်အိတ်ပေါ်မှာထားပါ။ ယင်းဝတ်စုံကိုသူတို့ကို Taping optional ကိုဖြစ်ပါတယ်။
4 အဆင့်။ စကေးနှင့်အတူအမှုန့်ကိုတိုင်းတာပါ။ သငျသညျသောက်သုံးသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သေချာ% 100 ချင်တယ်။
5 အဆင့်။ beaker မှအမှုန့်ထည့်ပါ။
6 အဆင့်။ ပျော်ဖို့ BA ဘွဲ့လောကကိုလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားထည့်ပါ။
7 အဆင့်။ ကြီးမားသောကွန်တိန်နာအတွင်းရေချထားပါ။
8 အဆင့်။ ရေမှ Clen ရောနှော Add နှင့်အလွန်ကောင်းစွာရောမွှေပါ။
9 အဆင့်။ ပုလင်းထဲမှာထားပါနှင့်ထိပ်တန်းထည့်ပါ။
ဗိုလ်လုပွဲထုတ်ကုန် 10mcg / ml မှာ Clen ၏ 100 လီတာဖြစ်သင့်သည်။
ဒီစာရွက်စိတ်ကူးယဉ်ဖျော်ဖြေရေးရည်ရွယ်ချက်များအဘို့ဖြစ်၏နှင့်ကြိုးပမ်းမရသင့်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားအန္တရာယ်ရှိဓာတုပစ္စည်းများဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာအစသီအိုရီသည်နှင့်အလေ့အကျင့်၌ပြစ်မှားမိခဲ့သေးပါဘူး။
သငျသညျ ... ပုံးအတွက်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဒီပစ္စည်းပစ္စယစေရန်ရှိသည်မတိုင်မီ -IMO ဒီလိုလုပ်ဖို့သာတလမ်းတည်းဖြင့်လည်းမရှိ ...
-step one- (ဟုတ်တယ်တစ်ဂရမ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်း, သင်တို့ပိုင်ခွင့်ကိုဖတ်) 0.2g ရဲ့ထွက်တိုင်းတာ
တစ်ဦးရောစပ်အချို့သောမျိုးပန်းကန်, ဒါမှမဟုတ် beaker သို့ everclear ၏ -pour 200mls
ဒီဒီတော့လူနာဖြစ်နှင့်သိမ်းသွားခြင်းကိုရ dont dizzolve ရန်အလွန်လွယ်ကူသည် ... clen အမှုန့်များ၏ 0.2g ရဲ့ -add နှင့်အနိမ့်အပူသက်ဆိုင်ပါသည်။
ယင်း၏ dizzolved အချို့သောမျိုးကြီးမားတဲ့ကွန်တိန်နာသို့ dizzolved ဖြေရှင်းချက်လောင်း -after ... ကိုယ့်ကိုပယ်ဖြတ်ထိပ်နှင့်အတူတစ်ဂါလံကိုရေဘူးကိုသုံးပါ။
-then ရေစက်ရေ 800ml ရဲ့ add ...
-BAM ... သင်အရည်၏ 1000ml ရဲ့ရှိတယ် clen @ 200mcg / ml
- ကထွက်ဆွဲခြင်းနှင့် 50ml သို့မဟုတ် 100ml ဖလားဖြည့်ပါနှင့်သင့်ပြုမိ။
Clenbuterol HCL အမှုန့်တက်ဘလက်-20mcg
မဂ္ဂနီစီယမ် stearate 1mg
1 ။ 20kN တစ်ချုံ့နှင့်အတူဆေးပြားအားလုံးကိုတစ်ဦး Turbula ရောနှောအတွက်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်စာနယ်ဇင်းရောမွှေပါ။
2 ။ 100mm လာကြတယ်သုံးပြီး 8mg တက်ဘလက်သို့ Compress ။
7 ။ Clenbuterol HCL အမှုန့်ဈေးကွက်:
IV ။ ကုန်ကြမ်း Clenbuterol HCL အမှုန့် (CAS 21898-19-1) ဝယ်ဖို့ကဘယ်လို; AASraw ထံမှ CLEN HCL အမှုန့်ကိုဝယ်?